Waxaa uu qoraalkan hoos ku qoran uu ka hadlayaa eray ku qoran buuga Somali som fremmedspråk, eraygaas oo ah KUU. Liv waxay wax ka su'aashay Martin Orwin oo ah macallin ku taqasusay luuqada af soomaaliga. Su'aashii Liv iyo Jawaabtii Martin ka aqrista qoraalka hoos ku qoran.
Liv Bøyesen oo ka hadashay tijaabinta caruurta ku hadasha labada luuqadood
Liv Bøyesen oo ah khabiir ku takhasustay tijaabinta carrurta ku hadasha labada luqadaood. Waxay aad ugu dheeraatay sida ay muhiim u tahay in la tijaabiyo heerka aqooneed ee luqadaha kala duwan ee ay ku hadlaan carruurta ku hadasha luqadaha aan ahayn tan Noorweyjiga. Waxay hoosta ka xariiqday dhibaatooyinka u gaarka ah carruurta ku hadasaha luqada Afsoomaaliga iyo caqabadaha ku gedaaman.
Waxaa link-ga hoos ku qoran aad ka aqrisan kartaan waxyaabihii ay Liv ka hadashay ee ka faa'iideysi wanaagsan.
Waxyaabihii ay Vigdis Glommen kaga soo qeyb qaadatay shirkii barayaasha af soomaaliga ee ka dhacay degmada Larvik 08-09.04.2010
Vigdis Glømmen oo shirweynaha u metalaysay haya`ada NAFO ayaa aad ugu hadashay muhiimada uu macallinka labada luqadood u leeyahay ardayga dibad yaalka ah. Waxa kale oo ay wax ka taataabatay manhajka waxbarasho ee afka hooyo. Vigdis waxay sharaxday qiimaha Uu leeyahay nidaamka wada shaqeynta saddex geeska ah ee ka dheexeeya barayaasha labada luqadood, kuwa noorweyjiga iyo ardayga laftiisa.
Waxaa link-ga hoos ku qoran aad ka aqrisan kartaan qoraaladii ay Vigdis Glommen ay ku soo bandhigtay shirkii ay nagala qeyb gashay, ka faa'iideysi wacan.
Shirkii barayaasha af-soomaaliga ee ka dhacay degmada Larvik, ee dalka Norway 08-09.04.2010
Shir ay ka soo qayb galeen guud ahaan barayaasha afka hooyo iyo labada luqadood ee dhalashadoodu ka soo jeedo dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay degmada Larvik ee dalka Noorway 8 ilaa 9kii bishan April. Ujeedada shirkan ayaa waxay salka ku haysay bog- guriyeed ama mareeg internet oo loo sameeyay barayaasha afka hooyo oo ka kooban lix luqadood oo af soomaaliguna ka mid yahay.
Kulanka barayaasha afka hooye ee dalka Norway
Waxa ay wasaaradda waxbarashada iyo komuunka Larvik si wada jir ah ugu baaqayaan dhamaanba barayaasha afka hooyo iyo kuwa kale ee ka caawiya maadooyinka kaleba in ay kasoo qeyb galaan shirkan oo ka dhici doona Magaalada Larvik bisha abriil. Waxa aan idinka codsanaynaa in aad isa soo diiwaan gelisaan.
Buugg xannaano oo wata cd, dvd iyo buugba.
Waa buug loogu tala galay carruurta yar yar oo ku qoran afkaaga hooyo. Buuggu wuxu wataa CD, DVD. Halkan ka dhegayso cd-ga la socda buugga. Ka dalbo buuggan www.afkahooyo.com. Guji halkan....
Lexin waa qaamuus af soomaali ah.
Kulan lagu mideynayo eray bixinta afka soomaaliga
Jaamacadda Hargeysa oo Heshiis Iskaashi la Saxeexatay Mid ka Mid ah Jaamacadaha ugu Waaweyn Norway
21 febraayo sanad guuradii 10aad ee maalinta afka hooyo!
Bogga af Iswidishka Svensk språkside